Mivonto ny tarehy rehefa mifoha - ny antony sy ny fanasitranana | Bezzia
Mivonto ny tarehy rehefa mifoha, ny antony ary ny fanafodiny
La tarehy mivonto rehefa mifoha zavatra matetika loatra io. Marina fa tsy maintsy mitady ny niandohany foana ianao mba hanandramana hisorohana ny fiverenany indray. Saingy tsy isalasalana fa iray amin'ireo fahatsapana niainantsika efa mihoatra ny indray mandeha. Mitsangana ianao, mijery fitaratra ary mahita fa nisy zavatra niova.
Tsy mitovy amin'ny endrikao akory izany, fa izany tokoa. Indraindray, fivontosana mety hiseho ambanin`ny maso, raha amin'ny fotoana hafa dia azontsika atao ny manamarika izany manodidina ny vava ary na amin'ny faritra hafa amin'ny tarehy aza. Tsy mila miahiahy be loatra ianao! Eto ianao dia hanamarina ny antony rehetra ary mazava ho azy, ho hitanao ny vahaolana.
1 Ny antony mahatonga ny tarehy bontolo rehefa mifoha
2 Fanafody hanafoanana tarehy mivonto rehefa mifoha
Ny antony mahatonga ny tarehy bontolo rehefa mifoha
Ny iray amin'ireo antony mazava indrindra mahita tarehy mivonto rehefa mifoha noho ny fihazonana tsiranoka. Indrindra rehefa voalaza fa ny fivontosana dia hita eo amin'ny faritry ny maso ary miaraka amin'ny fahatsapana havizanana kely. Amin'ny lafiny iray, io fihazonana tsiranoka io dia mety avy amin'ny toerana noraisintsika rehefa natory na tamin'ny sakafontsika.
Amin'ny fanangonana ranon-javatra miaraka amin'ny poizina sasany, dia mahazatra ny fivontosan'ny hodi-maso ary indraindray koa ny faritra takolaka. Noho izany, amin'ity lafiny ity dia tsy tokony hanahy be loatra isika. SAINGY raha miaraka amin'ny soritr'aretina hafa ny fivontosana satria mety ho fanina izy ireo, aretin'andoha mafy na tazo mahery, avy eo tsy maintsy manatona dokotera isika. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria mety ho antony mahatonga ny fiota amin'ny karazana fitsaboana raisinao na manondro karazana aretina hafa.
Fanafody hanafoanana tarehy mivonto rehefa mifoha
Ny tena mahazatra dia ny fitehirizana tsiranoka ny olana. Ka mba hisorohana an'izany rehetra izany dia misy foana ny fanasitranana ataontsika eo am-pelatanantsika. Ny voalohany sy manan-danja indrindra dia misotroa rano ampy. Rehefa miteny isika hoe rano dia ampiasaina ho infusions na lasopy ihany koa, fa ny habeny dia manodidina ny roa litatra isan'andro. Amin'izany fomba izany dia hanafoana ny poizina isika, hanadio ny vatana ary hodiovina ampy ny taova mba hanatanterahana ny asany lehibe.
Tsy afaka manadino momba izany isika ranona voajanahary. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria ankoatry ny hydrating antsika dia manatanteraka hatrany ny asany izy ireo amin'ny famelana antsika vitamina tsara indrindra. Isaky ny maraina dia efa afaka manana rano vera misy voasarimakirana ianao. Izay hampandeha tsara ny vatanao, hanao veloma ny poizina tsy ilainy. Ny voatabia ary koa ny pasteky dia zava-dehibe ihany koa. Sady noho ny manankarena amin'ny rano no ho an'ny mineraly sy vitamina ananany.
Tsy maintsy mampihena ny habetsaky ny sira amin'ny sakafo. Zavatra tsy mankasitraka ny vatana satria hahatonga ny voantsika tsy hahavita ny asa fanadiovana azy ireo. Toy ny efa noresahintsika ny sira dia tsy maintsy mitandrina amin'ny siramamy isika. Tsy hamela zavatra tsara ho antsika koa izy ireo. Tsy ilaina ny manafoana azy ireo tanteraka, mametra fotsiny ny fanjifany.
Raha nifoha tamin'ny tarehy marefo ianao, fika mahomby sy haingana indrindra dia ny fanomanana fampidirana chamomile. Raha tokony hatao amin'ny sachet an'ny infusion dia ampio telo. Afanaina anaty rano ny rano, ampio ny sachets ary miandry minitra vitsy. Avy eo, esory izy ireo, avelao izy ireo hanafana kely ary ento any amin'ny vata fampangatsiahana. Mila mangatsiaka isika rehefa mipetaka amin'ny tarehy. Tsy maintsy handentika baolina landihazo amin'ny fampidirana sy manotra ny tarehy miaraka aminy. Ho hitanao fa rehefa afaka minitra vitsy aorian'ny fampiharana azy dia hidina tsikaritra ny fivontosana. Maina ary afaka manomboka ny maraina amin'ny fomba tsara indrindra ianao. Aza hadino ny mandoto betsaka na ao anaty na any ivelany! Satria amin'ity fomba ity dia hisaotra anao ny vatanao sy ny hoditrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Mivonto ny tarehy rehefa mifoha, ny antony ary ny fanafodiny
Voaroy miaraka amin'ny zavokà
Hevitra mora 3 hamoronana pendants tanimanga anao manokana